पूर्वपतिसँगको सेक्स भिडियोले पिरोल्यो यी नायिकालाई | Rajmarga
पूर्वपतिसँगको सेक्स भिडियोले पिरोल्यो यी नायिकालाई
अहिले यो भिडियोलाई भाइरल गराइदिने भन्दै पूर्वपति लव कपुरले उनलाई ब्याकमेलिङ गर्न थालेका छन् । यस बारेमा अलिशाले प्रहरीमा उजुरीसमेत गरेकी छन् । आफूलाई नशालु पदार्थ खुवाएर लव कपुरले सेक्स गरेको उनको दावी छ । तर, श्रीमानले श्रीमतीलाई सेक्स गर्न नशालु पदार्थ खुवाउँछ भनेर कसले पत्याउला ? यद्यपि, एसएसपी वैभव सिंहले यसमा छानविन गर्ने आदेश दिएका छन् ।
अलिशा नबाब गाजीउद्दीनको वंशज हुन् । उनले बलिउड फिल्म ‘माई हस्बेन्ड वाईफ’ र ‘डर्टी डान्सर’ मा अभिनय गरेकी छन् । अहिले भने उनको हात खाली छ ।
Previous post: १४ वर्षिय छोराको कोठामा पसेकी आमाले देखिन् यस्तो भयानक दृष्य , उड्यो आमाको होस् !
Next post: ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ मा टिम अभयाकी सानिध्यालाई लिन सनुप र प्रमोदबिच हानाथाप, के भने सनुपले ?